जाजरकोटमा पोषण सुधार्न ९२ लाख रकम विनियोजित « News24 : Premium News Channel
जाजरकोट। जाजरकोट जिल्लामा पोषण संवेदनशील कार्यक्रमका लागि रु ९२ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।
आव २०७३\_७४ का लागि जिल्लामा पोषण तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारबाट उक्त रकम विनियोजन गरिएको जिल्लास्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशिका समितिका अध्यक्ष एवम् स्थानीय जिल्ला विकास अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले बताउनुभयो ।
सागकाे अचुक फाइदा
आफ्नो दाँतलाई कसरी बलियो र चम्किलो बनाउँने ? यस्ता छन् घरेलु उपायहरु !
९९ वर्षीय राष्ट्रकवि घिमिरेरको स्वास्थ्यमा सुधार